October 13, 2020 - Amawpyay
တန်ဆောင်မုန်းလမွေးဖွားသူများအတွက် တစ်သက်တာ ဟောစာတမ်း.. တန်ဆောင်မုန်းလ အတွင်းမွေးဖွား သူများသည် သစ္စာတရား ဦးထိပ် ပန်ဆင် သူများ ဖြစ်ကြ မယ်ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ထား ရှိတတ်ကြ တယ်။ စိတ်၌ ခံစားချက် ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေ တတ်တယ် ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းခံ ရုန်းကန်ရခြင်းများလည်း များစွာရှိ၏ ဘဝအစတွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမယ် ခက်ခဲသည် ဆိုရာတွင်မောင်နှမ သားချင်း အတူတူမှာပင် ကိုယ်က ပိုပြီး ခက်ခဲ ပင်ပန်းမယ်။ အနစ်နာခံ ကြိုးစား ရမယ်။ သို့သော် အဖက်ဖက်မှအခက်အခဲ များကို ဇွဲနှင့် စွဲမြဲစွာ လုပ်ကိုင်ကြိုးစားရင်း သာမန်ထက် ပိုအောင်မြင်မည်။ တန်ဆောင်မုန်း လမွေးဖွား သူတို့သည် ဘဝတွင် မိမိအပေါ်နားလည်ပေး …
AB သွေးအမျိုးတွေ STAY HOME ဖြစ်ရင် ဘာတွေ လုပ်တတ်သလဲ။
AB သွေးအမျိုးတွေ STAY HOME ဖြစ်ရင် ဘာတွေ လုပ်တတ်သလဲ။ Stay Home ဆို နေတော့ AB သွေး အမျိုးတွေ အိမ်မှာ ဘာတွေ လုပ်နေကြ သလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက် ရအောင် လား။ ၁. အစွဲအလန်းကြီး သူတစ်ယောက်ပါ။ အိမ်တွင်းမှာ အကုန်လုံးပြီးမယ့် ဝါသနာကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ ပါ။ ဒီဟာ ကိုပဲ အသဲအသန်း လုပ်ပြီးရင်း လုပ်နေမှာ ပါ။ ၂. စိတ်ထဲပေါ်လာရင်ထလုပ်။ သာမန် အချိန်တွေမှာ လုပ်လေ့ မရှိတဲ့ အရာတွေကို၊ တခုပြီး တခု လုပ်သွား မှာပါ။ လုပ်ရင်လည်း မပြီးပြီးအောင် …
B သွေးအမျိုးတွေ STAY HOME ဖြစ်ရင် ဘာတွေ လုပ်တတ်သလဲ။
B သွေးအမျိုးတွေ STAY HOME ဖြစ်ရင် ဘာတွေ လုပ်တတ်သလဲ။ Stay Home ဆိုနေတော့ B သွေးအမျိုးတွေ အိမ်မှာ ဘာတွေ လုပ်နေကြသလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက် ရအောင်လား။ ၁. ရုတ်တရက်ကြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးတွေ ထလုပ်။ ဘာဖြစ်တာမှန်းမသိ၊ ရုတ်တရက်ကြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးကို အကွက်ကျကျ ထလုပ်တတ်ပါတယ်။ သူက သန့်ရှင်းရေး သိပ်မလုပ်၊ ဖြစ်သလိုနေ တတ်ပင်မယ့်လည်း လုပ်ပြီဆိုရင် သေချာ လုပ်တတ် ပါတယ်။ ၂. လက်ပန်းကျတဲ့အချိန်အထိ လုပ်တယ်။ ဂိမ်းကစားရင်လည်း ဂိမ်းတမျိုးကို စွဲသွားပြီ ဆိုရင် အဲဒီဂိမ်းကို သေအောင်ဆော့တယ်။ ပြီးရင် ကောက်ရိုးမီးတောက် သလိုပဲ၊ နောက်တခုပြောင်း သွားတတ် …
CRUSHဆီက ATTENTION ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
CRUSHဆီက ATTENTION ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ကိုယ်Crushနေတဲ့ သူဆီက Attention ရအောင် လုပ်တာက ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ သူမသိအောင် တိတ်တိတ်လေးပဲ မသိမသာ ခိုးကြိုက်နေမယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ သူပြန်ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်ကသူနဲ့ နီးစပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါ တယ်နော်။ အချို့လူတွေပြော သလိုပေါ့ Crush ကပြန်ကြိုက်တယ် ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲ ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ ရသလို တကယ့်လက်တွေ့မှာလဲ ကိုယ့်Crushက ပြန်ကြိုက်လို့ အဆင်ပြေ သွားကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး Crushက ကိုယ့်ကို သတိထား မိအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ …
မည်းညစ်နေတဲ့ ပေါင်ခြံနဲ့ ချိုင်းကြား အသားအရေတွေ ကို ဖြူဖွေးသွားစေ မယ့် နည်းလမ်း (၅)သွယ်
မည်းညစ်နေတဲ့ ပေါင်ခြံနဲ့ ချိုင်းကြား အသားအရေတွေ ကို ဖြူဖွေးသွားစေ မယ့် နည်းလမ်း (၅)သွယ် ပေါင်ခြံတွေ၊ ချိုင်းကြားတွေ မည်းနေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းနေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ ခံစရာ မလိုတဲ့ နည်း လမ်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါ တယ် ။ အိမ်တွင်း နည်းလမ်းနဲ့ သဘာဝ ပစ္စည်းလေးတွေပဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဓာတ်မတည့် မှာတွေ ပူစရာ မလိုပါ ဘူးနော်။ ပုံမှန်လေး ၆လုပ်ပေး သွားရင် သိသာ ထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိ မှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော် ။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပတ်၏ အသုံးဝင်ပုံ ရှားစောင်း လက်ပပ် အနှစ်ကို …
ခုလို ကာလကြီးမှာ စိတ် ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာ စေနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း (၆)မျိုး ခုလို ကိုဗစ် ကာလ မှာတော့ လူတိုင်းလိုလို အနည်းနဲ့ အများ စိတ်ဖီစီးမှုတွေ ရှိ နေတတ်ပါတယ်။ကိုဗစ် ရဲ့ နောက် ဆက် တွဲ ကြောင့် စီးပွားေ ရး ဘက်မှာ ထိခိုက်န စ်နာမှုတွေ ရှိ နေ သလို တစ်ဖက် မှာလည်း ကျန်းမာရေး အတွက် စိုးရိမ် ပူပန် နေရတဲ့ ဒုက္ခ ကလည်း ရှိနေ ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ် ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီး မှုတွေ၊စိုးရိမ် ကြောင့်ကြ မှုေ တွကို လျော့ …